Banyere Aasraw Biochemical Technology Co., ltd
Aasraw Biochemical Technology Co., ltd sitere n’aka ndị gụsịrị akwụkwọ ise na Ph.D gụsịrị akwụkwọ na kemịkalụ injinia nke Mahadum Tulsa, Oklahoma, nke dị na mpaghara United States.
E guzobere AASraw ọhụụ mmalite ego buru ibu, ya mere dọtara ọtụtụ ndị na-eji ọgwụ kemịkalụ kacha elu, ọtụtụ na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ biochemical. Site n'enyemaka nke ego izizi, anyị tinyere ego na ngwa ọrụ kacha mma etinyere na njikọ, ịdị ọcha, na nyocha nke ngwaahịa anyị. Anyị bụ ụlọ nyocha zuru ezu, ọ bụghị naanị onye na-ere ngwaahịa ngwaahịa ndị ọzọ. Anyị nwere akụrụngwa zuru oke, gụnyere - calorimetry dị iche iche dị iche iche, chromatography nke mmiri mmiri na-arụ ọrụ nke ọma, infrared spectroscopy, ultraviolet-spectroscopy wdg. Ugbu a, anyị na-eji ihe karịrị isi teknụzụ teknụzụ iri abụọ. Akụ anyị nwere mere ihe karịrị nde dollar iri atọ (US).
Na mgbakwunye na ọrụ anyị na-arụkọ ogologo oge, anyị na-eme ndokwa ise ọ bụla n'ime afọ asatọ. AASraw nwere ihe karịrị otu narị ogige na mmepụta nnukwu. Ihe dị ka iri asatọ n'ime ogige ndị a na-enye ndị na-eri nri ozugbo, ebe ihe dịka iri abụọ na-emepụta n'okpuru ụlọ ọrụ na ihe karịrị iri atọ ụlọ ọrụ ọgwụ na ụwa.
N'ịgbaso ụkpụrụ "Amamihe, Okwukwe, Ọrụ," AASraw na-enye ngwongwo nwere oke pụrụ iche, ụgwọ dị ala, na nrụpụta zuru oke iji nyere aka na ndụ kacha mma n'ụwa niile. A na-enye ngwaahịa niile sitere na AASraw na ịdị ọcha nke na-erughị 98%, na ha niile na-achịkwa nke ọma n'okpuru ISO9001, UPS 36, BP2016, EP6, GMP ma ọ bụ asambodo ndị ọzọ dị ka achọrọ iji kwado ụkpụrụ achọrọ nke mba mbubata.
Innovation bụ isi iyi nke ike anyị. Site n'ịrụsi ọrụ ike nke ndị ọrụ anyị niile raara onwe ha nye, nhụgidesi ike ha, yana nkwado anyị na ụlọ ọrụ, kọleji na ụlọ ọrụ, AASraw emeela ka arụmọrụ anyị dịkwuo mma site ma ọ dịkarịa ala 30%, na-enyere aka belata ọnụahịa anyị jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-azụ ahịa, si otú ahụ ọ dị mma ka anyị na-ejere ndị ahịa anyị na-eguzosi ike n'ihe ozi, nakwa ka anyị belata nsị nke na-abanye n'ime gburugburu ebe obibi.
AASraw na-agbalị ịhazi ụkpụrụ maka mma na ịnye ọnụahịa. Anyị na-enye ọrụ na-akwụwa aka ọtọ, na ndị ọkachamara na ndị ọkachamara dị elu, iji wetara gị naanị ndị kasị mma na ogige. Anyị na-edozi ụkpụrụ ọhụụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ anyị.